Xisbiyada siyaasadeed ee Mali waxay dalbanayaan in xukuumadda talada haysa ay ixtiraamto jadwalka kala guurka - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Xisbiyada siyaasadeed ee Mali waxay dalbanayaan in xukuumadda talada haysa ay ixtiraamto...
Xisbiyada siyaasadeed ee Mali waxay dalbanayaan in xukuumadda talada haysa ay ixtiraamto jadwalka kala guurka
Isbaheysiga xisbiyada siyaasadda ayaa Sabtidii fadhi ku yeeshay magaalada Bamako si ay u dalbadaan in ciidamada milateriga ee dalkaas ay qabanqaabiyaan doorashooyinka sanadka soo socda.
Hogaamiyaasha ciidamada Mali ayaa lagu eedeeyay in ay ka cagajiidayaan jadwalka kala guurka, kaas oo dhigaya in dib loogu soo celiyo xukunka rayidka ah Febraayo 2022.
“Annaga, xisbiyada siyaasadeed iyo kooxaha siyaasadda ee qaab-dhismeedka loogu talagalay kala-guurka guuleysta ee Mali, ma fahmin caqli-gaabnimada gebi ahaanba iska hor imanaya ee dawladda, taas oo khatar gelinaysa horumarka kala-guurka iyo xidhiidhka saaxiibadayada ee ku saabsan jadwalka doorashada, hay’adaha. dib-u-habaynta iyo dib-u-eegista qoraallada,” ayuu yidhi Amadou Koïta, af hayeenka xisbiyada siyaasadda iyo kooxaha siyaasadda ee qaab dhismeedka beddelka isbeddelka wanaagsan ee Mali.
Toddobaadyadii la soo dhaafay, wufuud ka kala socotay Qaramada Midoobay iyo ECOWAS ayaa ku sugnaa Bamako si ay ugu cadaadiyaan maamulka inay u dhaqaaqaan qabanqaabada doorashada.
Ra’iisul wasaare Choguel Miaga ayaa sheegay in doorashada ay dib u dhici karto bilo.
“Haddii ay dhacdo in ku-meel-gaadhnimada la kordhiyo iyada oo aan laga doodin, waxaan haysanaa waddooyin sharci ah oo uu noo dammaanad qaadayo dastuurka Mali. ayuu yiri Abacary Touré, oo u dhaqdhaqaaqa mucaaradku.
Isbeddelka Maali waxaa gilgilay afgambigii bishii May ka dhacay dalkaasi oo hogaamiyihii milatariga ee dalkaasi Colonel Assimi Goita uu afgambiyay maamulkii ku meel gaadhka ahaa ee uu madaxweyne ku xigeenka ka ahaa.
Ururada bulshada rayidka ayaa ku eedeeyay militariga inay doonayaan inay xukunka sii hayaan.
Hogaamiyayaasha Galbeedka Afrika ayaa maanta oo Axad ah kulan ka yeelanaya Mali iyo Guinea oo ajandaha ugu sarreeya ee laga hadli doono ah.
Previous articleMarooko waxay xiisaynaysaa nidaamka difaaca Iron Dome ee Israa’iil
Next articleFallaagada Itoobiya ayaa beenisay in ujeedkoodu uu yahay in ay la wareegaan caasimadda
Xog-Rooble oo Rumeystay Digniin amni oo xafiiskiisa horay loo siiyay iyo Sarkaal Kashifay Weerarada.
Saraakiil ka tirsan NISA oo warqad Xasaasi ah u diray R/W Rooble.
Beesha Naalaye Ahmed oo Ahmed Karaash ku Eedaysay inuu boobayo kursiga tirsigiisu yahay 235